China flat imaskhi ukukhiqizwa machine earloop imaski machine umphakeli earloop ubuso imaski machine ifektri abakhiqizi | I-Haojing
Uma kuqhathaniswa nomunye umshini wokushisela we-earband mathupha, lo mshini unedivayisi ejikelezayo. Udinga ukufaka imaski kuphela kudivayisi bese ucindezela inkinobho ukwenza insimbi. Akunasidingo sokuguqula imaski ngesandla. Uma ufuna ukuhlanganisa ezinye izinhlobo zobuso, udinga kuphela ukwenza ushintsho oluncane kusisetshenziswa bese ususa idivayisi ejikelezayo.
Ikakhulu esetshenziselwa Welding N95 imaski indlebe imichilo
Izingcezu eziyi-15-25 / iminithi
Isetshenziselwa ukuqondisa okuzenzakalelayo kwemaski, akukho msebenzi owenziwayo odingekayo
Langaphambilini imaski yesandla abenzi bomshini indlebe iluphu yobuso imaskhi abenzi bemishini
Olandelayo: Ubuso beMask Machine china n95 imaski yokwenza umshini Umshini wokugoqa ozenzakalelayo we-edge edge